Induction Brazing Heating Exchanger mapaipi endarira kune vanobatisisa
Copper machubhu Cu-DHP acc. kusvika EN12735 kana EN1057
- Dhairemu / ukobvu hweyokunze tube: 12.5 x 0.35 uye 16.75 x 0.4
- Rudzi rweungano: lap jojo
Brazing alloy mhete
HLQ Forodha Coil
Nguva: ≈ 5s
Aigadzira yekudziya inotsvagawo emarudzi akasiyana maindasitiri aida kuwedzera kuchengetedza kweanoshanda uye huwandu hwekugadzira panguva yekuitiswa.
Takagashira sampule yeanopisa moto yaive chikamu cheungano chaiyo (inopfuura 10 m kureba). Chinangwa chaive chekusarudza yakakodzera kwazvo dhizaini yekodhi iyo inotendera iyo kuburitsa kusungurudza kwemajoini maviri kuti kuitwe panguva imwe chete.
HLQ timu yakakurudzira kushandisa iyo DWS inova yekufambisa induction yekudziya iyo inogona kushandiswa seyakabata ruoko ruoko kana inogona kuve yakabatanidzwa ne robotic ruoko for automated kugadzirwa mitsara.
Тhe yakaita bvunzo yakafanana nenzvimbo chaiyo yekupisa kwechigadzirwa pane kutevedzera chaiyo yekushanda mamiriro. Isu takashandisa yakasarudzika-yakagadzirirwa elliptical coil ine chinzvimbo chinogadzirisa kubatsira mutyairi kuwana zvinodzokororwa zvawanikwa, pamwe nekuwedzera chiyero chekugadzira nekutarisa 2 majoini e5 sec. Nekuda kweizvozvo, iyo bhatani yakabatana inova yakachengeteka zvakanyanya uye inodonhedza-chiratidzo.
Kuenzaniswa negesi girofu brazing, induction heat haibudisi murazvo wakavhurika, saka zvakachengeteka zvakanyanya kune weanoshanda. Kukurumidza kuita uye kudzokorora kunovimbiswa.
Vanopisa vakachinja zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji - kupisa nzvimbo, firiji, mhepo yekushambadzira, magetsi emagetsi, zvidyarwa zvemakemikari, zvidyarwa petrochemical, mafuta ekuchera mafuta, kugadzira gasi rechisikigo, uye kurapwa kwemadhiza.
Kupisa kwakachengeteka pasina murazvo wakavhurika
Kunyatso kutonga pamusoro penguva uye tembiricha inoguma yakagadziriswa mhando uye inoenderana mhedzisiro
Maitiro anodzokororwa, asiri anovhiya anoshanda
Simba inoshanda kupisa kupisa
Categories Technologies Tags kupisa kupisa exchanger, yakakwirira frequency kupisa kupisa exchanger, induction inopenya mhangura yekudziya exchanger, induction kupisa kupisa exchanger, induction ichipisa kupisa exchanger mapaipi, RF kupisa kupisa exchanger Post navigation